लगानीकर्ताको अर्बौ स्वाह हुँदा पनि बोर्ड र नेप्से किन चुप ? - Aarthiknews
लगानीकर्ताको अर्बौ स्वाह हुँदा पनि बोर्ड र नेप्से किन चुप ?
काठमाडौं । शेयर बजारलाई अति संवेदनशील मानिन्छ । अस्वभाविक गिरावट वा अनियन्त्रित रुपमा उकालो चढ्न थालेमा त्यसलाई ब्रेक लगाएर नियन्त्रण पनि गरिन्छ ।
एकैदिन उच्चदरमा घट्ने वा बढ्ने गर्दा सर्किट ब्रेकर लगाउने चलन पनि छ । तर, लगातार दिनदिनैको गिरावटलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय छैन ।
पहिला–पहिला निरन्तर ओरालो लाग्दा वा उकालो लाग्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा नेपाल स्टक एक्चेन्जले सूचना नै जारी गर्ने गर्दथे र नियन्त्रणको प्रयास गर्दथे । तर, अहिले लगानीकर्तालार्ई सजक बनाउने सूचना नै आउँदैन । किन ?
यतिबेला शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । १३ सय अंकमाथि पुगेको नेप्से १२७५ अंकतिर आइपुगेको छ । बजेटपछि त उच्च अंकले घटिसकेको छ । निरन्तर ओरालो लाग्दा पनि नियामक निकाय बोर्ड वा नेप्से कुनैले पनि लगानीकर्ता संयम हुन आग्रह गरेका छैनन् । किन त ? किन मौनता ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्की र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाबीच लगानीकर्तालाई कसले सजग बनाउने भन्ने बिषयमा विवाद हुन पुग्यो । बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले नियामन गर्ने निकाय बोर्ड भएकाले बोर्डले नै सूचना जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा र थपलियाले शेयर बजारका कुरा भएकाले नेप्सेले नै सजक बनाउने काम गर्ने भन्दै दुवैबीच ‘वाकयुद्ध’ नै चल्न पुग्यो । त्यसपछि न बोर्डले न त नेप्सेले नै सूचना जारी गर्ने गरेका छन् ।
शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएपछि लगानीकर्ता अहिले शेयर बजारप्रति झन् निराश छन् ।
बोर्डको नेतृत्व गर्दै आएका अध्यक्ष कार्कीले बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, शेयर दलाल थप्ने, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा भित्र्याउने, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने, बजार निर्माता भित्र्याउने जस्ता थुप्रै काम गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैनन् । उनले योजना सार्वजनिक गरेर लगानीकर्तालाई आशा जगाउने मात्र काम गरे तर काम गर्न सकेका छैनन् ।
बजारमा थामिनसक्नु गरी आपूर्ति बढेको तर माग बढाउने एउटा काम भएको छैन । शेयर बजार निरन्तर बढ्दै जाँदा वा निरन्तर घट्दै जाँदा अस्वभाविक भन्दै दिनदिनै वक्तव्यबाजी गर्ने बोर्ड र नेप्से अहिले दिनदिनै घटेर लगानीकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ स्वाहा हुँदा पनि बजारलाई आड दिने कुनै काम नगरी चुपचाप बसेका छन् ।
नेपालको शेयर बजारको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय भएकाले बजार सुधार र बिस्तारका लागि बोर्डलाई सर्वाधिकार प्राप्त छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत धितोपत्र बोर्डलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ । शेयर बजारका सारा लगानीकर्ताले पनि बोर्डलाई अभिभावक मानेका छन् । तर, बोर्ड र नेप्से निरीह बन्दै जानुको रहस्य लगानीकर्ताले बुझ्न सकेका छैनन् ।
शेयरबजारमा घटबढ् भइरहन्छ, यो नियमै हो । शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयरको भाऊ बढाई देऊ वा घटाई देऊ भन्नु पनि हुँदैन् । तर, अनावश्यक चलखेल हुन थाल्यो भने बोर्ड र नेप्से मुखमा दही जमाएर बस्न पनि हुँदैन ।
एक डेढ वर्षअघिसमम्म कहिले बोर्डले त कहिले नेप्सेले लगानीकर्तालाई हल्लाको भरमा लगानी नगर्न सुझाव दिन्थे । सम्बन्धित कम्पनीको आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषण गरेरमात्र शेयरमा लगानी गर्नु भन्थे । उनीहरुको भाषा भने जहिले पनि एकै खालको हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यही पनि भन्न छाडेका छन् ।
‘मुलुकको आर्थिक गतिविधि तथा नीति नियमले कम्पनीको क्रियाकलापमा प्रभाव पार्ने हुँदा यसले शेयर मूल्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ,’ नेप्सेले दुई वर्षअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, साथै लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्राविधिक विश्लेषणका साथै आधारभूत विश्लेषण नगर्दा जोखिम धेरै हुन्छ । त्यसैले यस्ता विश्लेषण गरी लगानीसम्बन्धी निर्णय गरेमा मात्र ‘प्राइस इज द फङ्सन अफ इन्फर्मेसन’ भन्ने भनाइ सार्थक हुन्छ ।
बोर्ड र नेप्सेले जोखिम, नाफा, सुरक्षा, तरलता जस्ता गुणको विश्लेषण गरी किनबेच गर्न, हल्लाको भरमा नलागी सत्यतथ्य सूचनाको आधारमा कारोबार गर्न र बजारमा चलेको हल्लालाई पुष्टि गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्ने गर्दथे । तर, अहिले त्यस्ता सूचना एक सिंगे गैंडा जस्तै दुर्लभ भएको छ । अहिले शेयर बजारमा लगानीकर्ता हल्लाको पछाडि लाग्नै छोडेका हुन त ? सर्वसाधारणको जिज्ञासा छ ।